Iifomula zokubala - Shenzhen HONGSBELT
IsiNgesi (eUSA) iYunithi X
= Iyunithi yeMetric
X Phinda-phinda nge
= Iyunithi yesiNgesi (eUSA).
Uxinzelelo / Uxinzelelo
TC = ( °F - 32) / 1.8
Conveyor Belt Tensile Amandla
C Uphawu Ingcaciso
Jonga iTheyibhile FC
D Uphawu Inkcazo
I-Shaft Deflection ratio
E Uphawu Inkcazo
Inqanaba lokwandiswa kweShaft
F Uphawu Inkcazelo
I-Friction Coefficient phakathi kwe-Belt Edge kwaye ubambe i-Strip
I-Friction Coefficient phakathi kwe-Carry Product kunye ne-Belt Surface
I-Friction Coefficient ye-Belt Support Material
I-Tensile Strength Coefficient ihlonyelwe
I-Conveyor Belt iTemperature Coefficient ilungisiwe
Umphakamo weConveyor uthambekele ukuphakama.
I Uphawu Inkcazelo
L Inkcazo yophawu
Umgama wokuHambisa (iNdawo esembindini ukusuka kwi-Drive Shaft ukuya kwi-Idler Shaft)
Buyela ngendlela eNgqo Qhuba ubude beCandelo
Qhuba Indlela eNgqo Qhuba ubude beCandelo
M uphawu Inkcazo
Inqanaba leNqanaba le-Spiral Conveyor
Imveliso eqokelelweyo yoMlinganiselo weNdawo yepesenti yeCarry Way
R Uphawu Inkcazo
S Symbol Inkcazo
Isithuba phakathi kokuBeka
I-Shaft iyonke iyalayisha
IYunithi yeBhanti yoMhambisi eVumelelekileyo
Iyunithi ye-Conveyor Belt Catenary's Sag tension.
IYunithi yeBhanti yoMhambisi iyonke yoxinzelelo
IYunithi yeBhanti yoMhambisi wodidi oluKhethekileyo Iyonke Uxinzelelo
V iSimboli Ingcaciso
W Inkcazo yophawu
Uxinzelelo lweFriction oluqokelelweyo
IPusher kunye neBidirectional
Kwi-pusher okanye i-bidirectional conveyor, ukunyanzeliswa kwebhanti kuya kuba phezulu kune-conveyor eqhelekileyo ethe tye; ngoko ke, i-shafts kwiziphelo ezimbini ziyimfuneko ukuba zithathwe njenge-drive shafts kwaye zifakwe ekubaleni. Ngokubanzi, kuqikelelwa amaxesha angama-2.2 amava okufumana uxinzelelo olupheleleyo lwebhanti.
IFOMU: TWS = 2.2 TW = 2.2 TB X FA
I-TWS kule yunithi ithetha ukubalwa koxinzelelo lwe-bidirectional okanye isiqhubi sokuhambisa.
Ubalo loxinzelelo lwe-TWS yesidluliseli esijikayo kukubala uxinzelelo oluqokelelweyo. Ke ngoko, uxinezeleko kwicandelo ngalinye elithweleyo liya kuchaphazela ixabiso loxinzelelo lulonke. Oko kuthetha ukuba, ukunyanzeliswa okupheleleyo kuqokelelwe ukususela ekuqaleni kwecandelo lokuqhuba ngendlela yokubuyisela, kunye nendlela yokubuyela kwindawo ye-idler, kwaye emva koko udlule kwicandelo lokuthwala ukuya kwicandelo lokuqhuba.
Indawo yoyilo kule yunithi yi-T0 ephantsi kwe-drive shaft. Ixabiso lika T0 lilingana noziro; sibala icandelo ngalinye ukusuka kwi-T0. Umzekelo, icandelo lokuqala elithe ngqo kwindlela yokubuyisela lisuka ku-T0 ukuya kwi-T1, kwaye oko kuthetha ukuba uxinzelelo oluqokelelweyo lwe-T1.
I-T2 yintlupheko eqokelelweyo yendawo yokujika kwindlela yokubuya; kwelinye igama, luxinzelelo oluqokelelweyo lwe-T0, T1 kunye ne-T2. Nceda ngokomfanekiso ongasentla kwaye ucinge ngoxinzelelo oluqokelelweyo lwamacandelo okugqibela.
IFOMU: TWS = ( T6 )
I-TWS kule yunithi ithetha ukubalwa koxinzelelo lwe-conveyor ejikayo.
IFOMU: T0 = 0
Uxinzelelo lwe-catenary sag kwindawo yokuqhuba.
IFOMU: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB
Uxinzelelo lwecandelo lokujika kwindlela yokubuya.
Ngexabiso le-Ca kunye ne-Cb, nceda ubhekisele kwiTheyibhile Fc.
IFOMU: TN = TN-1 + FBW X LR X WB
IFOMU: TN = TN-1 + FBW X LP X ( WB + WP )
IFOMU: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )
Uxinzelelo lwecandelo lokujika kwindlela yokuthwala.
IFOMU: TWS = TB × FA
I-TWS kule yunithi ithetha ukubalwa koxinzelelo lwe-spiral conveyor.
IFOMU: TB = [ 2 × RO × M + ( L1 + L2 )] ( WP + 2WB ) × FBW + ( WP × H )
IFOMU: TA = BS × FS × FT
Nceda ubhekisele kwiTheyibhile FT kunye neTheyibhile yeFS.
Ukuthelekiswa kwe-TA kunye ne-TB, kunye nezinye izibalo ezinxulumene nazo ziyafana nezinye iintlobo zokuhambisa. Kukho izithintelo ezithile kunye nemimiselo yoyilo kunye nokwakhiwa kwe-spiral conveyor. Ke ngoko, ngelixa usebenzisa i-HONGSBELT spiral okanye ukuguqula amabhanti kwi-spiral conveyor system, sicebisa ukuba ubhekisele kwi-HONGSBELT Engineering manual kwaye uqhagamshelane nesebe lethu lenkonzo yobugcisa ngolwazi oluthe vetshe kunye neenkcukacha.
IFOMU: TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW ] XL + ( WP XH )
Ukuba iimveliso eziphetheyo zinophawu lokufumba, amandla okukhuhlana i-Wf athe anyuka ngexesha lokupakishwa kokuhanjiswa kufuneka athathwe ngokubala.
IFOMU: TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW + Wf ] XL + ( WP XH )
IFOMU: Wf = WP X FBP X PP
Ngenxa yezinto ezahlukeneyo zebhanti zinamandla ahlukeneyo okuxinana okuya kuchaphazeleka ngokuhluka kweqondo lokushisa. Ngoko ke, ukubalwa kweyunithi ye-tension evumelekileyo ye-TA ingasetyenziselwa ukungafani nebhanti ye-tension ye-TW. Esi siphumo sokubala siya kukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo lokukhetha ibhanti kwaye ufanise iimfuno zomhambisi. Nceda ubhekisele kwiTheyibhile FS kunye neTheyibhile Ts kwimenyu esekhohlo.
IFOMU: TA = BS X FS X FT
BS = Amandla oMbane weBhanti yoMhambisi ( Kg / M )
FS kunye FT Jonga kwiTheyibhile FS kunye neTheyibhile FT
IFOMU: SL = ( TW + SW ) ?BW
Iqhutywa / Idler Shaft Weight Table - SW
Shaft Imilinganiselo Ubunzima beShaft ( Kg/M )
Intsimbi yeCarbon Yenziwe ngentsimbi eshayinayo Ingxubevange yeAluminiyam
Ishafu yesikwere 38mm 11.33 11.48 3.94
Ukuphambuka kwe-Drive / Idler Shaft-DS
Ngaphandle koKuthwala okuPhakathi
I-DS = 1 ?10-4 ( SL ?SB3 / E ?I )
Ukunyameka kwe-Drive Shaft - E
Izinto eziphathekayo Yenziwe ngentsimbi eshayinayo Intsimbi yeCarbon Ingxubevange yeAluminiyam
Qhuba iShaft Elastic Rate 19700 21100 7000
Umzuzu we-Iertia - I
Bore diameter of drive sprocket Umzuzu we-inetia yeshaft ( mm4 )
I-Square Shaft 38mm 174817
Qhuba iShaft Torque Calculation - TS
Ngexabiso lokubala elingentla, nceda uthelekise netheyibhile engezantsi ukuze ukhethe eyona shaft yokuqhuba. Ukuba i-torque ye-drive shaft isenamandla kakhulu, i-sprocket encinci ingasetyenziselwa ukunciphisa i-torque, kwaye iphinde ihlawule iindleko eziphambili ze-shaft kunye nokuthwala.
Ukusebenzisa i-sprocket encinci ukulingana ishaft yokuqhuba enobubanzi obukhulu ukunciphisa itorque, okanye ukusebenzisa i-sprocket enkulu ukulingana ishaft yokuqhuba enobubanzi obuncinci ukunyusa itorque.
Ubuninzi beTorque Factor yeDrive Shaft
Torque Izinto eziphathekayo Ububanzi beJenali (mm)
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 180 135 90 68 45 28 12
Intsimbi yeCarbon 127 85 58 45 28 17 10
Ingxubevange yeAluminiyam -- -- -- 28 17 12 5
Ukuba i-motor ye-drive ikhethelwe i-motor yokunciphisa i-gear, umlinganiselo wamandla ehashe kufuneka ube mkhulu kuneemveliso ezithweleyo kunye ne-total force force eyenziwa ngexesha lokuqhuba ibhanti.
Amandla eHashe (HP)
IFOMU : = ( TW × BW × V ) / ( 6.12 × R )
Izinto zikaloliwe Ubushushu FC
Izinto zebhanti Yomile Imanzi
Inayiloni 0.35 0.25
Inayiloni 0.20 0.20
Nceda uthelekise izinto zomzila kunye nebhanti yokuhambisa kunye nenkqubo yokuthutha kwindawo eyomileyo okanye emanzi ukuze ufumane ixabiso le FC.
Ca, Ixabiso leCb
Ibhanti yokuhambisa iEngile I-Friction Coefficient phakathi kwe-Conveyor Belt Edge kunye ne-Rail Strip
Emva kokufumana ixabiso le-FC kwi-Table FC, nceda uthelekise kunye ne-angle egobileyo ye-conveyor, kwaye unokufumana ixabiso le-Ca kunye nexabiso le-Cb.